SP-L09 SOICARE 300ml huni hwezviyo 7 Led Lights yakakosha mafuta aromatherapy ultrasonic diffuser, China SP-L09 SOICARE 300ml huni tsanga 7 Mwenje Mwenje yakakosha mafuta aromatherapy ultrasonic diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries limited
SOICARE 300ml huni tsanga 7 Led Mwenje yakakosha mafuta aromatherapy ultrasonic diffuser
· Isina mvura Yekuvhara-yakavharwa uye BPA Yemahara-- Nemvura isina mvura yekuvhara-kudzika basa, ichi humidifier chinodzima otomatiki kana mvura yapera. Izvi zvinogona kukuchengetedza iwe uye chengetedza chishandiso pachacho zvakare. Iyo aromatherapy diffuser inogadzirwa neyeBPA-yemahara zvinhu, inova 100% isiri-chepfu uye nharaunda-inoshamwaridzika.
· Ultrasonic Technology - Iyo inonhuhwirira diffuser inoshandisa iyo ultrasonic mafungu kuti pakarepo vaporize mvura uye yakakosha mafuta mutangi, kuburitsa inotonhorera inonhuhwirira mhute, uye kubvumira iyo inonhuwira kuyangarara mumhepo, kunyorovesa mhepo. Mumba mako muchazara nekunhuwirira, izvo zvinogona kukuvimbisai kurara zvirinani. Yakakwana yekurara, yekudzidzira imba, hofisi, yekutandarira, yoga, SPA, mucheche kamuri, nezvimwe.
· 7 Kuchinja Colors Mwenje Mwenje - Iyo mwenje ye LED inogona kuiswa kune 7 anonyaradza mavara. Unogona kuitenderedza kuburikidza nemavara manomwe, kana kuiisa kune imwe yakatarwa kara.Ruvara shanduko runotsvedzerera pamwe zvinyoro shanduko. Nechekuchinja kweruvara, zvinogona kugadzira mamiriro ekudanana.
· Chipo Chakakwana - Iyo inonhuhwirira disuser inoshandisa dhizaini dhizaini dhizaini, sechinhu chinoshongedza. Icho chisarudzo chakanaka kushandisa izvi sezvipo kushamwari dzako uye mhuri, vadikani.
woodgrain ultrasonic aromatherapy yakakosha mafuta diffuser